: at 5/30/2009 03:46:00 AM
တဂ်ကြပြန်ပြီ ..ကိုနေညိုရင့် ရဲ့နောင် အနှစ် ၂၀ ကြာသော် ...တဲ့ ။
အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ။ ဘယ် အရာမှ မမြဲ ကြတာ ။ မသိတာလည်းမဟုတ်။ အိုရမယ် ၊ နာရမယ် ၊သေရမယ် ။သေချင်းတရားက လက်တကမ်းမှာ အမြဲ ရှိနေတာ ။ ဒီ အနှစ် ၂၀ အတွင်းမှာ သေမင်းက မျက်စေ့နောက်လို့ မခေါ်ချင်သေးဘူး၊ ကိုယ့်အလှည့် ကျမလာ သေးဘူး ဆိုရင်တော့ အသေအချာ ပြောပြနိူင်တာ ဟာဖြင့်ယခု လက်ရှိ အသက်အရွယ်ထက် ၂၀ နှစ်တောင် ပိုကြီးရင့်သွားမှာပေါ့။ ရုပ်ခန္ဓာ အရ မအိုချင်လို့ မရဘူး ။ ဒါပေမဲ့စိတ်သဏ္ဍန် ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဓါတ် စွမ်းအား လေ့ကျင့်မှုအပေါ် အများကြီး တည်နေတယ် ။အဟက် ..စိတ်ပျို ကိုယ်နု ။မအိုသေးတဲ့ သူ အပြိုလေးနဲ့ တူ ။ အဲလေ ။ ထားပါတော့ ဒါတွေ ။ ဆရာကြီး ကိုင်ရိုတောင်မသိဘူး ။နောင်အနှစ် ၂၀ မှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေမလဲ ။
အဟက် ဒါပေမဲ့ ပြင်ညာရှိ တို့ ပြေးကြည့် လိုက်တာ ။ခွေး အလိုက်ခံ ရလို့ .နောက်တခါ ဖြေးဖြေးလေး သွားကြည့်လိုက်တယ် ။
။၂၀၃၀ ခုနှစ် မိုးဦးကျ အခါသမယ ။
ရှမ်းပြည် တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့အနီး ဟိုပုန်းဒီပုန်း မြို့ ကြီး ရဲ့ အဝင် လှေခါးထစ်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ခြံကြီးအတွင်း မှာ ၃သီးစား စပါး နှင့် ကြီးထွား သီးနှံများစိုက်ပျိုးဖို့အလုပ်ရှုပ်နေသော လယ်သူမကြီး ဖွားကိ ။ ခမောက် လေးဆောင်းပြီး မိုးရွာထဲမှာ လယ်ထွန် နေပေမဲ့တချက်မှ မောပန်းဟန်မရှိ ။ ဘယ် မောပါ့ မလဲလေ ။ နောက်ဆုံးပေါ် နွားရိုဘော့စက်ရုပ်ကြီးတွေ ကသူခိုင်းသမျှ လုပ်ပေးနေတာကိုး ။ဖွားကြီး ကိ ကပြန့် ပြူးနေတဲ့ လယ်ကန်သင်းဘောင်ပေါ် အသာလေးထိုင်ကြည့်ပြီး ရီမုဒ် စက်ခလုပ်တွေနဲ့ထိန်းချုပ်နေရုံပါဘဲ ။ ဒီစက်ရုပ်ကြီးတွေ ကို တီထွင်ပေးတဲ့ဂျပန်ပြန်ကြီး ဦးကြယ်စင်မင်း တောင် ခုဆိုရင် သိပ္ပံနည်းပညာ ဆိုင်ရာ ဝံကြီး ဖြစ်နေပြီဘဲဟာ။ လွန်ခဲ့ တဲ့အနှစ် ၂၀ ကျော်တုံး က ဦးနှောက်မဲ့ လဒတွေကြီးစိုးတဲ့ ခေတ်က နွားတွေကို တိုင်မှာချည်ပြီး နွားအား လျှပ်စစ်ဓါတ်ထုတ်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူများကို တကယ်ဘဲ နားမလည်နိူင်ခဲ့ ပါဘူး ။ အတွေးမဆုံးခင်မှာ ဖွားကြီးကိရဲ့ မြေးမငယ်လေး တယောက် လာပြောမှ ဒီနေ့အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံတော် တိုးတက်သာယာရေး စည်းဝေးတခု တက်ဖို့သတိရတယ် ။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၈ နာရီ ။
အစည်းဝေး က မဟာရန်ကုန် မြို့ တော် နှစ်ထပ်ကွမ်းမှာ နံနက် ၁၀ နာရီမှာ စမယ်တဲ့ ။ အထူးဧည့်သည်တော် အကြံပေး အနေနဲ့ တက်ရောက်ရမဲ့ ဖိတ်စာ လေးကို ကြည့်ပြီး ရိုဘော့ (Robot) ဒရိုင်ဘာ ဆီ ခရီးစဉ် ဒေတာတွေ ထဲ့ သွင်းပေးလိုက်တယ် ။
့တောင်ကြီး နဲ့ ရန်ကုန် ခရီးဆို တာ ခုခေတ် မှာ ဘာကြာတာမှတ်လို့ဟိုင်းဝေး မိုးပျံ တံတား ကနေ နန်းစတော့(ရှမ်းမလေးရဲ့အမည်မဟုတ်ပါ) မောင်းရင် ၁နာရီ၁၅ မိနစ် ဆို ရန်ကုန်ရွှေမြို့ တော်ရောက်နေပြီပေါ့ ။ ဒီလမ်းကြီးတွေ ကို ဖေါက်လုပ်ပေးခဲ့ တဲ့လမ်းတံတား ဆောက်လုပ်ရေး ဝံကြီး ဦးသုနြေ္ဒ ဆိုတာ ဟာလည်း ဖွားကြီး ကိရဲ့နှစ် ၂၀ ကျော်အချိန် တွေ တုံး က ဘဝတူ အလုပ်သမားကြီးလေ ။ သူ့ ကိုတောင် သတိရ လိုက် မိသေးတယ် ။
ကားပေါ်ရောက် တော့ အင်တာနက်ပေ့ါတဘဲဖုံးထဲ မှာ ဟို သူဌေးမင်းရဲ့စုတ်ချွန်းချွန်း ရုပ်ကြီးပေါ်လာလို့ လန့်သွားသေးတယ် ။ဒီ ဖုံးလေးကတော့ အခု ဆက်သွယ်ရေးဝံကြီး ဖြစ်နေတဲ့ဦးတောင်ပေါ်သား က ဖွားကိနဲ့ ဆက်သွယ်ရ လွယ်အောင် လက်ဆောင်ပေးထားတာလေ ။။ဖွားကိက မျက်စိမမှုံပေမဲ့ဒီလိုရုပ်ကြီး မမြင်တာ ကြာတော့ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ လည်း လန့် တာ ပေါ့အေ ။ အမား ။ နေကောင်းလား ။အရက်ဖိုး ပေး ဆို ပြီး အနှစ် ၂၀ကျော် က လှမ်းနောက်နေကျ အတိုင်းပါဘဲ ။ ဒီကောင်လေးလည်းပါးရေ နားရေ တွေတော့ တွန့်နေတာပေါ့လေ။ဇရာထောင်းတာ ဘယ်သူခံနိုင်ကြပေမလဲ ။ အမယ် သူ့ ကိုလည်း နယ်နယ်ရရ မထင်နေကြနဲ့ နော် ။ခုဆိုရင် မောဝ်ရှမ်း အရက် စက်ရုံ ကုပ္မဏီ သူဌေးကြီး ဦးအိုက်ခီလောက် တဲ့။ သူ့ အရက်တွေ ကမ္ဘာမှာ အရောင်းကောင်းဆုံး နံပါတ် ၃ တဲ့ ဟေ ။
၉နာရီ၁၅ မိနစ် -ရွှေမြို့ တော်ကြီးဆီ ရောက်ပါပြီ ။ အချိန် ၄၅ မိနစ်စောနေသေးလို့စားနေကျဆိုင် က
ဝက်သားဒုတ်ထိုးဆိုင် ကို မောင်းခိုင်းလိုက်တယ် ။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ ကျော်က ရန်ကုန်မြို့ လို့ ပြောရင်တောင် ယုံချင်စရာ တစက်မှ မရှိဘူး ။ကြည့် လိုက်စမ်းပါအုံး ၊ သန့် ပြန့် နေလိုက်တာလေ ။ ဖုံတစက် ။ ယင်တကောင် ။ခြင်တကောင်၊ ကြွက်တကောင် ၊ခွေးဝဲစား တကောင်တလေမျှ မရှိလောက်အောင် သန့် ရှင်းသစ်လွင်နေလိုက်တာ ။ စလုံး သန့် တာလောက်တော့ ရီလိုက်ချင်သေး ။
အဟေးဟေး ။ အင်း ဂလို ရီတော့လဲ အတိတ်တုံးက ကိုရင်ညိမ်းကြီးရီသံကို ကြားယောင်လိုက်ပါသေးတော် ။
ဝက်သားဒုတ်ထိုး အူစုံ သည်းစုံ လျှာ နားရွက် မကျန်အောင် တုတ်ပေးလိုက်တာတောင် မြန်မာငွေ ခြင်္သေ့ခေါင်းစိမ်း ၁၀
မကျဘူးအေ ။ ဒီနေရာလေးမှာဘဲ နှစ် ၂၀ ကျော်တုံး က ချစ်တဲ့ သူလေးနဲ့ လာစားခဲ့ဖူးတာပေါ့ ။အဲဒီတုံးက ဖေါင်းဖေါင်းပွပွ နံနံစော်စော် ငွေမည်းမည်းလေးတွေ ဆို တသောင်းနီးပါး ကျခဲ့တာ အေ့ ။ဆိုင်က အထွက် ၊ မျက်မှန်ထူထူ အမျိုးသမီး ပုဝဝလေးက လာနှုတ်ဆက်လို့မနည်းကြည့်ယူ ရတယ်။ ဪ။ ခု ပြင်ညာရေး ဝံကြီး နှင့် ဗမာတပြည်လုံးဆိုင်ရာ မူကြို ကျောင်း အသင်း နာယကကြီး ဒေါ်ငုံ (ဒေါ်ဖူး) ပါလား ။ အတော်ဘဲ သူလည်း အခု စည်းဝေးတက်ဖို့ သွားမှာတဲ့ လေ။ မတွေ့ တာကြာတော့ ထွေရာ အပါးလေးဆယ်ပြောရအောင်ဆိုပြီး သူစီးလာတဲ့ မဟာစီတီး ကားကြီးနဲ့ ဒရိုင်ဘာ ကို အရင်ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီးသကာလ ၂ယောက်အတူ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ စမြုပ်ပြန်ရင်း နဲ့ အစည်းဝေးကျင်းပမဲ့ဒီမို လွှတ်တော် အဆောက်အဦကြီးရှိရာ သို့ ဦးတည် လာကြတယ်ပေါ့။
နေရာကတော့ မပြောင်းလဲ ပါဘူး ။ ဒီနေရာမှာဘဲ အရင်က မဟုတ် တရုပ်တွေဆောက်သွားခဲ့ တဲ့ ပုံမကျ ပန်းမကျ လေးဒေါင့် အတုံးအတုံး ခေါင်မိုးချွန်တက်တွေ နဲ့ပြားပြားပုပု ဗြဲလရမ်း အဆောက်အဦကို ဖြိုချ ပြီး အသစ်တဖန် ပြန်လည်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အထပ် ၂၀၀ ဒီမို လွှတ်တော် အဆောက်အဦ သစ်ကြီး မုဒ်ဦး အဝမှာ ဟိုးအရင်က မြင်နေကြ ဆိုင်းဘုတ်နီ ရှည်လမြောပေါ်မှာ ပေါက်တတ်ကရ အရေးပေါင်းများစွာ တွေလည်း မရှိ တော့တဲ့ အတွက် မျက်စိအမြင်နဲ့တင် စိတ်ချမ်းသာ လှပါတယ် ။ လမ်းတလျှောက် နီယွမ်မီးပြောင်လက်စွာနဲ့ လှပနေတဲ့မီးပွိုင့် တိုင်းမှာလည်း အရင်နဲ့ မတူ အချိန်မှန် ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေကြတာမို့ကားတွေ ဘယ်လောက်များများ ယခင်လို လမ်းပိတ်ဆို့့ပြီး အချိန်ကြာတတ်တာတို့မရှိကြတော့ပါဘူး ။
ဖြူဖြူ ဖွေးဖွေး ပရုပ်လုံးလေးတွေ ဟာလည်း တကဲ့ ကို တာဝန်မလစ်ဟင်းရလေအောင် ထမ်းဆောင်နေကြတာ တွေ့ တော့ အရင်နှစ် ၂၀ကျော်က လဖက်ရည်ဖိုးတောင်းတဲ့အကျင့်တွေကို ဘကြီးဒေါ်၊ဘိုးဒေါ်ကြီးတွှေ ဆီမှအမွေမဆက်ခံချင်ကြရအောင် သူတို့လေးတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို အမှန်ပြင်ပေးနိုင်လိုက်တဲ့လက်ရှိပြည်ထဲရေး ဝံကြီး ဦးဖိုးစိန် ကိုတွေ့ မှ ချီးမွှန်းလိုက်အုံးမှ လို့ အတွေး စ မပြတ်မှီ မှာဘဲ ဖွားကိရဲ့ မဟာအော်လဗိုဒီးဖွတ် ( မာစီဒီး+အော်ဒီ+ဗော်လဗို+ဖိုဒ့် ကုန်ပဏီတွေဖက်စပ်ထုတ်လုပ်ထားသည့်နောက်ဆုံးပေါ်လိပ်တက်မောဒယ် ) ကားကြီးဟာခမ်းနားကြီးကျယ်လှပ ကျက်သရေ ရှိလှတဲ့ ဒီမို လွှတ်တော် အဆောက်အဦကြီးရဲ့ ဆင်ဝင် (လဒမှလွဲ၍ အားလုံးဝင်လို့ရ၏) အောက်မှာ ညိမ့် ကနဲ ထိုးရပ်လိုက်ပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ လုံးလုံး လေး တလုံး က အပြေးလေးလှိမ့်လာပြီး ဖွားကိကို အားရ ဝမ်းနာ စွာလာရောက်နှုတ်ဆက်သူရဲ့အသံ စာစာ လေးကို ကြားလိုက်ရတော့ နှစ်၂၀ ကျော်က အတိုင်း အဝမပျက် ရှိနေတဲ့ဒေါ် အကေးရှား ကြီးပါလား ။ သူက ခုဆို ပြန်ကြားရေးဝံကြီး တောင်ဖြစ်နေပြီဘဲ။ အရင်နှစ်၂၀ကျော်တုံးက ဘလောဂ်ရောဂါတွေ ထကြတုံးကတည်းက သူ့ အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုထား ပြီးသားဘဲလေ ။ဟိုဖက် စကား၊ဒီဖက်စကား အားလုံး သူက ပြန်ကြား နိုင်လောက်အောင်ကို အစွမ်း အစ ရှိတဲ့ သူပေကိုး ။သူ နဲ့ အတူ ဘေးချင်းယှဉ်ပြေးလာသူတဦး ကတော့ အနူပညာ ဆို၊က၊ရေး၊တီး ဝံကြီး ဒေါ်ပြုတ် ပေါ့၊သူကလည်း မြန်မာ့ရိုးရာ အနုပညာတွေ မတိမ်ကော ရလေအောင် ရှေးမြန်မာ သီချင်းကြီး သီချင်းလတ်တွေကို မကြာခဏဆို သလို ဘူဒိုဇာ နဲ့ ထိုး ပြီး အစပြန်ဖေါ်ပေးခဲ့ သူပေဘဲ ။အင်း တော်ကြရှာပါပေတယ် ။
ဖွားကြီးကိ အရင် နှစ် ၂၀ တုံးက သိဖူးခင်ဖူးခဲ့ ကြသူများ အားလုံး လိုလို ခုဆို အကောင်ကြီးကြီး ဝံကြီးတွေ ဖြစ်နေကြပါ ကလား ။
ဒီလို နဲ့ သူတို့ ၃ဦး (ဒေါ်ငုံ ၊ဒေါ်ပြုတ် ၊ဒေါ်ကေး ဝံကြီး ၃ပါး) ခြံရံပြီး သကာလ လွှတ်တော်ခန်းမကြီးထဲ ရောက်တော့
အချိန်က ကွက်တိ နံနက် ၁၀ နာရီပေါ့ ။ ခုဆို အရာအားလုံးဟာ အင်မတန် တိကျလှတဲ့မြန်မာစံတော်ချိန် အတိုင်း
လုပ်ဆောင် နေကြတော့ ဘယ် ယန္တရားမဆို ချောမွေ့ စွာ လည်ပတ်လို့နေကြပါပြီ ။
အဲဒီအချိန်မှာ စည်းဝေးစဉ်မြင့်ပေါ်အရင် ရောက်ရှိ နေရာယူကြပြီးဖြစ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဝံကြီး ဦးလူထွင်း ၊ သာသနာဖျက် အဲ သာသနာရေးဝံကြီး ဦး နေညို ရင့် နဲ့နိုင်ဂံဂျားရေးဝံကြီး ဒေါ်အယ်ဇီ တို့ သုံးဦး တို့ က မတ်တပ်ရပ်ပြီး ဖွားကိ ကို အရိုအသေ ပြုတဲ့ အတွက်ရုတ်တရက်ကြောင်သွားပြီး ကိုယ့်ဦးခေါင်းပေါ်ကိုယ် စမ်းကြည့် တော့မှ အဖြစ်မှန် ကို ရိပ်စားမိလိုက်ပါတော့တယ် ။
။နေပူ မိုးရွာ မရှောင် အမြဲတစေ နှစ်သက်စွာ ဆောင်းလာခဲ့ တဲ့ဝါးခမောက်ကြီး က ဖွားကိ ခေါင်းပေါ်မှာ အိနြေ္ဒကျက်သရေ ရှိလှစွာနဲ့ ရှိနေတာမို့ဒီဝံကြီး ၃ ပါးက သူတို့အလေးအမြတ်ထားတဲ့ ခမောက်ကြီးကို အရိုအသေ ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပါ။
ဒီလိုနဲ့ ဘဲ သဘာပတိကြီးနေရာ မှာ ထိုင်ဖို့ထိုင်ခုံကို ဆွဲအယူမှာ မြင်လိုက်ရတဲ့့မြင်ကွင်းကြောင့် လိပ်ပြာလွင့်သွားမတတ် ဖြစ်ပြီး အတိတ်ကို သတိပြန်ရ မိပါတယ်။ အလိုလေး လေး သွေးတွေ မတရားစုပ်ထားပြီး မရှုနိုင် မကယ်နိုင် ဖြစ်နေကြတဲ့ ဂျပိုးကြီး ၄ကောင်ပါလား ။ ဂျပိုးဘဝရောက်နေကြတာတောင် ဖင်ထိုင်ခုံပေါ်က မဆင်းနိုင်ဖြစ်နေကြရ တဲ့ဝဋ်ငရဲတွေ ခံနေကြရတာပါလား ။
ဒီမှာတင် ပါနာတိပါတာ ကံကိုလည်း ဖွားကိတယောက် မကြောက်နိုင်တော့ပါဘူး ။ လူတိုင်း အော့နှလုံးနာလှတဲ့ဒီဂျပိုးလေးကောင်ကို အင်ဖရာ ရက် လေဆာဂန်းနဲ့ တချက် ဆော်ပြီးသွားတဲ့ သကာလ .. မီးခိုးတူးနံ့ရတာနဲ့လှည့်အကြည့်....
အမလေး ဗုဒ္ဓေါ ..ဘုရားကယ်ပါ ... မနက်ကျရင် ဝတ်ရမဲ့ ဂျူတီကုတ် အဖြူ ဖွေးဖွေးလေး မှာ ၃မြှောင့်သဏ္ဍန် မီးကျွမ်းရာ ကြီးနဲ့.....
နောင်အနှစ် ၂၀ ကြာရင် ဘာဖြစ်လာမလဲတော့ မသိ ။ ဒီ မိနစ် ၂၀ အတွင်း တက်ရမဲ့ အလုပ် မှာ ဘာ ဝတ်ရပါ့ မလဲ လို့ဇောချွေးများတောင် ပျံနေရပါပကောလားကွယ်။။
စိတ်ကူးယဉ် တာဘဲနော် ..ဘယ်သူ့ မှ ခွင့်ပြုချက်တောင်းစရာ မလိုဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
မည်သူ့ ကိုမျှ ထိခိုက် နစ်နာလိုစိတ် မရှိကြောင်းပါ ။ :))
နောင်အနှစ်ဘယ်လောက်ကြာအောင် ကိုယ်တို့ အသက်ရှင် နေနိူင်ကြရမလဲ? ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ကျန်းမာစွာ အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် ကိုယ်တို့ အတွက်ကျန်နေနိုင်သေးတဲ့ အချိန်လေးတွေ ကို သိချင်တယ် ဆိုရင်ဖြင့်ဒီနေရာလေး မှာ သွားကြည့် လိုက်ပေါ့နော် ။
လူတိုင်း စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့လောကကြီးမှာ ပျော်ရွှင် နေထိုင်နိုင်ကြပါစေ ...
:kiki : at 5/30/2009 03:46:00 AM
ကိုလူထွေး said... | Saturday, May 30, 2009 4:46:00 AM
ဝန်ကြီး လုပ်ဖို့ ....
(ကိုလူထွေးရဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကိုလဲ လာအားပေးပါဦး)
Sein Lyan said... | Saturday, May 30, 2009 4:49:00 AM
မြင်ယောင်မိတယ် အတိတ် မျက်ခင်းစိမ်းလေးပေါ့
မကီး ပေးတဲ့ရာထူးတွေက လူမှန် နေရာမှန်တွေ ဖြစ်နေပါလား
ဂျူနို said... | Saturday, May 30, 2009 4:49:00 AM
ဂျပိုးဘဝရောက်နေကြတာတောင် ဖင်ထိုင်ခုံပေါ်က မဆင်းနိုင်ဖြစ်နေကြရ တဲ့ဝဋ်ငရဲတွေ ခံနေကြရတာပါလား ။
ကိကိရေ ဒီကောင်တွေက နောင် အနှစ် ၂၀လည်း သွေးစုပ်နေအုန်းမှာလား။
ညည်းလေးကလည်း ခင်ရာမင်ရာ လက်သိပ်ထိုးပြီး ၀ံကြီးတွေ ပေးထားတာလာအေ။
ရိုးမှ ရိုးရဲ့ လား။
ငါ့ကိုတော့ တမင် ပြည်နင်ဒဏ်လိုပေးတာလား ။ နိုင်ငံခြားရေး ၀ံကြီးဆိုတော့ အပြင်ပဲ လျှောက်သွားနေရမှာပေါ့။
နာ ငပိနဲ့ မခွဲနိုင်ဘူး။ ပြည်ထဲရေး ၀ံကြီးလောက်ဆိုတော်သေး။
ဂျူနို said... | Saturday, May 30, 2009 4:52:00 AM
သူက ဆက်ဆံရေးကောင်းတယ်။ ဟဲဟဲ ဟဲဟဲနဲ့ အစဉ်ပြေအောင်ပေါင်းလ်ိမ့်မယ်။
နာတော့ အိမ်ဂျယ်ပဲ လုပ်မယ် ခုလိုပဲ
ရေတမာ said... | Saturday, May 30, 2009 10:55:00 AM
မကြီးကိ အဲ့ဒီအချိန်ကျရင် တမာရွက်ပြုတ်စားချင်ရင် အနော့်ဆီဖုန်းဆက်လိုက်နော်
Acacia said... | Saturday, May 30, 2009 11:23:00 AM
ဟင် ဘလိုင်းကြီးပါလား နေနှင့်အုံး ခုတော့ မအားသေးဘူး အလုပ်တွေ များနေတယ် ပြီးမှလာခဲ့မယ် ဟင်း
Anonymous said... | Saturday, May 30, 2009 12:42:00 PM
တော်သေးတာပေါ့ ဘူဒိုဇာဝံကြီး ဆိုတာ မပေါ်သေးလို့ ....
မဟာ အော်လဗိုဒီးဖွတ်က အဲချိန်မှာ ရှမ်းစတားဂျစ် လောက်ခောတ်မစားတော့ဘူး..
နားမလည်တာတခုလောက် လေးစွားစာ မေးခွင့်ပြုပါချင်...
(အထူ ဧည့်သည်တော်ဆိုတော့ ရိုသေမှ..)
ဟိုသွေးဝနေတဲ့ အကောင်ကြီးတွေကိုဆော်ထည့်လိုက်တဲ့ လက်နက်ပုန်းက ဘယ်နားမှာ တတ်ထားတာလဲဟင်... ဟေးဟေး..
kiki said... | Saturday, May 30, 2009 1:33:00 PM
အဟော်... ဂျီးတော် ပြုတ်ရယ် ....
လက်တကမ်းမှာဘဲ။ဒါပေမဲ့ ခပ်နက်နက်နေရာမှာ ပုန်းရှိုး ကွယ်ရှိုး ထဲ့ ထားတာပေါ့ကွယ် ..
သိချင်လာခဲ့ ..တိုးတိုးတိတ်တ်ိတ် ပြပါ့မယ် ..
yehtutnaung said... | Saturday, May 30, 2009 1:56:00 PM
သို့ / အရာပလိကြီးရှင့်..(အဲ) ခင်များး
ကျွန်တော့်ကို ငရဲကြီးရှစ်ထပ် ကျောသပ်ပြီး ပို့ နေတာလားဗျာ..။ သာသနာရေး ၀ံကြီးတော့ မလုပ်ပါရစေနဲ့ ...။ တကယ်သာသနာ ပျက်သွားမှာ စိုးလို့ ။ မသကာ လည်ရာပြန်စားရေး ဆိုတော်သေး။ နိပ်ပဟ!!
နောက်ခါ ရာထူး ပြန်လည်နေရာချရင် အဲလိုလေ ပေးနော်..ဟဲ။
(ခေတ္တ) သာသနာဖျက် ၀ံကြီး
မကိကီရေ ကျွန်တော်လဲ အဲလို စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေနဲ့အမိမြန်မာပြည်ကြီးကို ဖြစ်စေချင်တဲ့ သူတဦးပါဗျာ။ တနေ့ မလွဲ ဧကန်တော့ ဖြစ်ရမယ်ဗျာ...။
Anonymous said... | Saturday, May 30, 2009 2:20:00 PM
ဟွန်း ကြည့်ရဲဘူး... မေးရုံလေး မေးကြည့်သာ..
ဇော် said... | Sunday, May 31, 2009 4:46:00 AM
အဟိ။ ဖွားကြီးကိ နေကန်းဒယ်နော်။ ဟီးး
Acacia said... | Sunday, May 31, 2009 4:51:00 AM
သူများပုံလည်း မပို့ဘူးပဲနဲ့ နာမည်ဖျက်တယ်ဟင်း နာတော့မယ်
Anonymous said... | Sunday, May 31, 2009 7:44:00 PM
မင်းနန္ဒ said... | Sunday, May 31, 2009 10:32:00 PM
Hello testing 123 4
desertraindrops said... | Monday, June 01, 2009 12:31:00 AM
ကလေးတွေများတယ်ပြောရခက်တယ်။ ဆရာမကြီးစကားကို နားမထောင်ဘူး။ နည်းနည်းလေး နေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့ ကြည့်စမ်း ၀ံကြီးလုပ်နေကြတယ်။